Xulka Ivory Coast Oo Sida Geesiyaasha Loogu Soo Dhaweeyey Wadankooda – Daawo Muuqaaladii
HomeAfricaXulka Ivory Coast Oo Sida Geesiyaasha Loogu Soo Dhaweeyey Wadankooda – Daawo Muuqaaladii
Xukuumada Ivory Coast ayaa Isniintii Ka Dhigtay Maalin Fasax Qaran Ah Si Shacabka Oo Isku Duubani Xulka U Soo Dhaweeyaan
Boqolaal iyo boqolaal kun oo taageere ayaa tubnaa laga bilaabo madaarka ilaa wadooyinka caasimada ganacsiga wadanka Ivory Coast ee Abidjan si ay u qaabilaan wadankoodana ugu soo dhaweeyaan xidiga xulka qaranka maalintii Isniintii kadib markii ay soo qaadeen koobkii qaramada qaarada Afrika ee lagu qabtay sanadkan wadanka Equatorial Guinea.
Wadankan galbeedka qaarada Afrika ku yaala ayaa koobkii koobaad ee qaramada qaarada Afrika ah qaaday mudo 20 sanadood kor u dhaafaysa maalintii Axadii, iyagoo doorkana koobka ka qaaday xulka wadanka ay deriska yihiin ee Ghana rigoodhayaal 9-8 ah kadib ciyaar la gool la’aan ku dhamaatay wakhtigii loogu tallo gallay.
Taageerayaal, soo daawanayay xulkooda lagu naanayso Maroodiyaasha oo ku guuldaraysanaya laba jeer oo ay Finalka yimaadeen mudadaas dhawr iyo labaatanka sanadood ahayd, soona dhex jibaaxay mashaqooyin siyaasadeed oo horseeday laba dagaal sokeeye , ayaa isa soo tubay dariiqyada iyo shaaracyada waaweyn si ay ugu fooladeeyaan guushan wax ku oolka ah ee qarankoodu gaadhay una soo dhaweeyaan.
‘Koobkani waa inuu nagu hagaa nidaam nabad gelyo. Siyaasiyiintuna waa inay noqdaan sida ciyaaryahanada oo kale. Waa inay midoobaan oo noo horseedaan nabad, dadkoodu ku waaro!’ sidaas waxa warbaahinta horteeda ka yidhi taageere lagu magacaabo Bakary Diomande.
Madaxweyne Alassane Ouattara, oo ku dhex mushaaxayay baabuur korka ka banaan sawaxankii damaashaadka habeenkii Axada, ayaa isla markiiba ku dhawaaqay in maalinta Isniinta ahi tahay maalin fasax qaran ah uguna baaqay shacabka reer Ivory Coast inay isugu soo baxaan oo aakhirka isugu soo ururaan garoonka lagoon-side national stadium si ay u muujiyaan jacaylka ay u qabaan xulka qarankooda.
‘Waa wax cajiib ah. Waxaanu leenahay koox iyo tababare aad u heer sareeya oon wax loo dhigaa jirin … Shacabka Ivory Coast wuu idiin han weyn yahay,’ ayuu madaxweyne Ouattara kor ugu dhawaaqay markii xulku guuleystay.
Sawaxanka iyo allalaaska farax ayay muujinayeen iyagoo lulaya kuna lebisan astaanta iyo midabka calanka Ivory Coast ee – midabada, Liimiga, cadaanka iyo cagaarka ka kooban – iyagoo is taxay jidka dhererkiisu dhan yahay 15 ka Km ee u dhexeeya Madaarka ilaa badhtamaha farasmagaalada magaalada.
Subaxnimadii Isniineed, saacado ka hor intii aanay diyaarada khaaska ah ee siday ciyaaryahanadu soo cago dhiganba, garoonka qaadkiisu 45,000 (shan iyo afartanka kun ee kursi) ka kooban yahay , dhamaantii waa buuxay , ciidamada Booliiskuna waxay fariimaha Mobile ka ah ugu dirayeen shacabka inay guryohooda joogaan sababo amaan awgeed.
‘Tan iyo shallay indho iskuma geyn oo ma seexan, waan daalanahay hadana garoonka ayaan sii joogayaa tan iyo 6-da subaxnimo si aan u sugo oo u arko ciyaaryahanadayada,’ ayay tidhi Fatou Kouyate iyadoo wali sii taagan.
Kabtanka xulka qaranka Ivory Coast, Yaya Toure ayaa u muuqday mid faraxsan oo culays badani ka degay, kadib markii uu isku daygii lixaad ku hantiyey biladii qaramada Afrika, wuxuuna si farxadi muquurisay u ruxayay koobkii isagoo korka ka saaran baabuur loo diyaariyey oo oogada ka bannaan.
‘Markaad naadigaaga koob la qaado , waa wax cajiib ah laakiin markaad xulkaaga kula guuleysato waa xaalad aan la rumaysan karin,’ ayuu yidhi.
‘Marxaladan waxaan soo sugayay sanado aad u badan. Waan ku riyoon jiray guushan. Aad bay iigu adag tahay inaan idiin sharaxo sida uu dareenkaygu yahay kabtan ahaan, waa wax uurkayga ku qarsoon uun.’
Dortmund VS Tottenham 1:2 All goals & Highlights 21/11/2017 HD
Colombia Oo Garaacday Brazil iyo Kaadh Cas Oo La Siiyey Neymar
18/06/2015 Abdiwahab Ahmed